Izindlela ezihamba phambili zeDropbox Ongazizama ngo-2020 - Uhlu
I-Dropbox yaziwa njengesitoreji sefu esithandwa kakhulu emhlabeni. Kepha, kwenzekani uma uke waphelelwa yisikhala lapho?Futhi, sizwile ukuthi iDropbox ibinezimbungulu ezimbalwa kule minyaka edlule ezonakalise izigidi zama-akhawunti.Ungathola i-akhawunti ye-premium ekunikeza isikhala esithe xaxa, noma ungamane usebenzise ezinye izindlela kwiDropbox. Kunamawebhusayithi amaningi anikela ngento efanayo, futhi mhlawumbe anganikela nangezici ezingcono kanye nokuphepha.
I-Dropbox noma ezinye izindlela ezikuvumela ukuthi ugcine amafayela akho abalulekile kwi-cloud drive futhi usebenzise noma yimaphi lawa mafayela kunoma iyiphi enye i-PC noma i-smartphone yakho ngokungena ngemvume.Uma ulapha ufuna amapulatifomu wokugcina amafu njengeDropbox, silapha ukukusiza.
Ufuna I-Adobe Creative Cloud Yabafundi? Bheka kusuka endabeni yethu yakamuva.
Ezinye izindlela ezihamba phambili zeDropbox:
ICloudMe iyipulatifomu yokugcina amafu ekuvumela ukuthi wenze isipele, ugcine futhi wabelane ngamafayela nabantu. Ungadlulisa kalula yonke idatha yakho kusuka kuDropbox iye ku-Cloudme ngokuchofoza okukodwa. Uma ubhalisela kule ngxenyekazi ukudala i-akhawunti, uzothola indawo yokugcina engu-5GB mahhala ngokushesha.
Isitoreji Samahhala: 5GB
Intengo: kuncike ngokuphelele kuhlelo olukhethile
ISugarSync ingenye indlela eya kuDropbox engasetshenziswa ukudlulisa noma ukwaba amafayela ngokuphepha okufanele. Uma usebenzisa i-SugarSync, ungaqiniseka ukuthi amafayela akho aphephile futhi avikelekile.Ivumela abasebenzisi ukuthi balayishe amafayela futhi bavumelanise amafayela kuwo wonke amadivayisi ahlukahlukene futhi basakaze ne-multimedia.Ungalanda uhlelo lokusebenza lweSupersync lwe-iOS ne-Android esitolo sohlelo lokusebenza.
Isitoreji Samahhala: Kumahhala izinsuku ezingama-30
Intengo: 100GB cishe $ 7.49 ngenyanga, 250GB cishe $ 9.99 ngenyanga, 500GB for $ 18.95 ngenyanga
3. IDrayivu Yethimba
IDrayivu Yethimba kungenye indlela eya kuDropbox ekuvumela ukuthi ugcine amafayela akho ngokuphepha. Ibuye inikeze ngenkonzo yokusekelayo. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa.Ungayisebenzisa ukulayisha noma yimaphi amafayela kule ngxenyekazi noma uwahlanganyele nabalingani bakho bebhizinisi. Le sevisi ilusizo kakhulu ngezinjongo zebhizinisi kunokusetshenziselwa wena uqobo.
Isitoreji Samahhala: 2GB
Intengo: 10GB cishe $ 59.50 ngonyaka
IMega iyinsizakalo yokugcina amafu ephephile ekunikeza cishe u-15GB wesitoreji mahhala ngokuphelele uma ungena ngemvume.Yize ingenazo ezinye izici zokuhlela. Kepha, ngasikhathi sinye, kungenye yamapulatifomu alula futhi alula kakhulu ongawasebenzisa ukugcina ngokuphepha amafayela akho kwisitoreji sefu ngamasu entengo akhokhelekayo futhi.
Isitoreji Samahhala: 50GB
Intengo: Ngokuphelele kuncike kunoma yiluphi uhlelo olukhethile
Ngokufana neDropbox, ukuvumelanisa kukuvumela ukuthi usebenzise futhi wabelane ngamafayela akho kunoma iyiphi idivayisi kunoma ngubani ofuna ukwabelana naye ngamafayela akho. Inezici zokuphepha eziqinile eziqinisekisa ukuthi nguwe kuphela ozokwazi ukufinyelela kudatha yakho ebalulekile.
Ukuvumelanisa kukuvumela ukuthi ulawule ukufinyelela kwephasiwedi, izaziso, izinsuku zokuphelelwa yisikhathi kanye namandla wokulayisha. Uzokwazi ukwabelana ngesixhumanisi sefayela nanoma ngubani ukuze bakwazi ukufinyelela kumafayili futhi into enhle kakhulu ukuthi umsebenzisi akadingi ukuba ne-akhawunti yokuvumelanisa ukubona amafayela.
Isitoreji Samahhala: 5 GB
Intengo: $ 49 unyaka ngamunye nge-500 GB yokugcina noma $ 96 unyaka ngamunye nge-2 TB yokugcina
Insizakalo yokugcina ifu ye-pCloud inabasebenzisi abacishe babe yizigidi eziyi-7 abavela kuwo wonke umhlaba. Ihluke kancane kuneDropbox ngoba inguqulo yedeskithophu ayisebenzisi indawo yakho yokugcina yekhompyutha.Ungahambisa wonke amafayela akho ngokuchofoza okukodwa ngohlelo oluzenzakalelayo.
Isitoreji Samahhala: 10 GB
Intengo: kuya ngecebo olikhethayo
I-Zoho Docs ingesinye sesitoreji samafu esingasetshenziswa esikhundleni seDropbox. Inezici ezithile ezinhle njengokuhlanganiswa kweDropbox, ukulayishwa kwenqwaba, ukuhlanganiswa kwe-imeyili, ukumakwa, ukuphathwa kokufinyelela, umhleli wedokhumenti, isiginesha yedijithali, nokunye okuningi.
Intengo: Kumahhala eqenjini labasebenzisi abangafika kwabangu-25.Kunezinhlelo ezahlukahlukene ezikhokhelwayo.
Ibhokisi liyipulatifomu enkulu yokugcina amafu yamabhizinisi amaningi. Ungayisebenzisela nokuzisebenzisela wena.Bakunikeza cishe i-10GB ekuqaleni. Kepha, banomkhawulo wokulayisha we-250MB ezungeze.Ngeke ukwazi ukulayisha noma yiliphi ifayela elikhudlwana kunalo sayizi.
Intengo: Ungakhetha kusuka ku-100 GB uye kwisitoreji esingenamkhawulo. Amanani ancike ohlelweni.
I-CloudUp yenza inqubo yokwabelana ngamafayela phakathi komthumeli nomamukeli ibe lula. Ikuvumela ukuthi ulayishe noma yiliphi ifayela kusuka kumavidiyo ukuya kuzixhumanisi. Lapho uthatha isinqumo sokwabelana ngamafayela nabanye abasebenzisi, uzodinga ukuwathumela isixhumanisi kuphela.Ingxenye engcono kakhulu ukuthi inikezela ngesitoreji esiningi samahhala kubasebenzisi bayo. Ungathuthukisa uhlelo lwakho luye kunguqulo ye-premium. Kepha, isitoreji sizofana.
Isitoreji Samahhala: 200GB
Intengo: mahhala ngokuphelele
9. Isicabucabu OAK
Uma ufuna enye i-Dropbox engcono kakhulu i-SpiderOak ingaba ngcono kuwe. Kuyisitoreji samafu esiphephile futhi esivikelekile futhi sinikeza isipele esimangalisayo sefu.Yebo, kufanele ukhumbule ukuthi lesi sitoreji samafu ngeke sikunikeze isitoreji samahhala.Kulabo abafuna ukugcinwa kwamafu okuyisisekelo nokugcinwa kwesipele, lokhu kuzoba ithuluzi elihle kakhulu. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa.
Isitoreji Samahhala: Kumahhala izinsuku ezingama-21
Intengo: 150GB cishe $ 5 ngenyanga, 400GB cishe $ 9 ngenyanga, 1Tb for $ 12 ngenyanga
10. I-Google Drayivu
I-Google Drayivu ngenye indlela eyinqolobane ethandwa kakhulu. Kokubili iDropbox neGoogle Drayivu kudalwe yiGoogle. I-Google Drayivu bekuyindlela yokugcina ethandwa kakhulu yamadokhumenti namashidi ngaphambilini.Uma usuvele usebenzisa i-Google Drayivu uzokwazi ukuthi uzokwazi ukuhlela idokhumenti ku-Google Drayivu. Ngakho-ke, yilokhu okwenza iGoogle Drayivu yehluke kwezinye.
I even ikuvumela ukuthi uphawule ngemibhalo futhi uhlanganyele nabanye abasebenzisi. Ngaphandle kwalokhu, kunesinye isici esihle esibizwa ngokuthi yi-speech to text tool. Ungasebenzisa lesi sici ukuthayipha umbhalo usebenzisa izwi lakho.
Isitoreji Samahhala: 15GB
Intengo: 100 GB nge $ 1.99 ngenyanga ne-1 TB nge $ 9.99 ngenyanga.
I-Onedrive iyisitoreji samafu esinge-Microsoft. Isisombululo esizedlula zonke sabasebenzisi beMicrosoft. Uma ungumnikazi we Windows 10 I-PC noma i-Laptop, i-OneDrive izofakwa kuqala kukhompyutha yakho.Uma uthuthukela i-OneDrive iye kuhlelo lwe-premium, awutholi isitoreji esithe xaxa kuphela.
Kepha, futhi uthola umkhawulo omkhulu wokulayisha.Ngohlelo lwe-premium, ungathola ezinye izici ezikhethekile ezibandakanya i-PDF Scanner.
Intengo: I-50 GB ngeye- $ 1.99 ngenyanga kanti i-1 TB ngeye- $ 6.99 ngenyanga
Ekuqaleni, iMediaFire ibiyinsizakalo yokwabelana ngamafayela kuphela, kepha ngokuhamba kwesikhathi bayenza njengendawo yokugcina amafu. Kulula kakhulu ukwabelana ngamafayela namafolda. Akuhlukile kunoma yiziphi ezinye izinsizakalo.I-interface kulula ukuyisebenzisa futhi uzokwazi kalula ukulawula idrayivu yokugcina kusuka kunoma iyiphi idivayisi.
Isitoreji Samahhala: 10GB
IntengoI-1 TB izobiza u- $ 7.50 ngenyanga
I-Workzone yisoftware yokuphatha amaphrojekthi. Inezici ezithile ezisebenziseka kakhulu ekuphathweni kwefayela, ekugcineni kanye nokwabelana ngefayela. Ungayisebenzisela izinhloso ezahlukahlukene.Ikuvumela ukuthi uphawule ngezithombe. Ngaphandle kwalokho, kukuvumela ukuthi ulandelele zonke izinguquko zefayela.
Isitoreji Samahhala: Cha
Intengo: Udinga ukucela amanani
I-Nextcloud iwebhusayithi ehlukile yokwabelana ngamafayela evumela abasebenzisi bayo ukuthi babelane ngezixhumanisi. Iningi lezinkampani ezincane zingayisebenzisa. Uma ukhetha amaphrojekthi womthombo ovulekile noma uvikele okubalulekile kwakho, leli thuluzi likulungele.
Isitoreji SamahhalaKuya ngokuthi ukhetha luphi uhlelo
IntengoKuya ngokuthi ukhetha luphi uhlelo
IDropbox ingenye yezingxenyekazi zokuqala ezenze izinsizakalo zokugcina amafu zaba yisidingo sabantu.Inkinga enkulu izici zokuphepha. Bonke abantu babheka isitoreji samafu esihlinzeka ngokuphepha nokuphepha kumafayili abo.Kunezindlela eziningi ongazithola kwisabelomali eshibhile futhi.